Muxuu hoggaanka Habargidir ka yiri xaaladda Galgaduud? | KEYDMEDIA ENGLISH
Muxuu hoggaanka Habargidir ka yiri xaaladda Galgaduud?
Guddoomiyaha Golaha Hoggaaminta Habargidir ayaa ka hadlay colaadda ka soo cusboonaatay degaannada Galmudug, wuxuuna diray baaq nabadeed oo dhowr dhinac ku wajahan.
MUQDISHO, Soomaaliya - Borofesoor Cabdiqaadir Maxamed Shirwac, oo ah hoggaanka dhaqanka beesha Habargidir, ayaa ka hadlay xaaladda ka soo cusboonaatay maamulka Galmudug, gaar ahaan magaalada Guriceel iyo dib u soo laabashada Ururka Ahlu-sunna Wal-jamaaca.
Professor Shirwac, wuxuu wax laga xunaado ku tilmaamay, in xilligaan [Qoriga xabadda la gashto] ayadoo saldano lagu raadinayo dhiig la daadiyo iyo shacab la barakiciyo, taas oo wiiqeysa nidaamka dowladnimada iyo amniga aan cagaha badan ku taagneyn ee degaanka.
Hoggaamiyuhu, wuxuu koox diimeedka duullaanka ah ugu baaqay in ay miiska wadahadalka tagaan, tabashadoodadna in wada-xaajood lagu xalliyo ogolaadaan, si looga baaqsado dagaallo sii siyaadiya dib u dhaca degaannada Galmudug.
Professor Shirwac, wuxuu ku baaqay in degaannada ka baxay gacanta Maamulka Galmudug dib loogu celiyo, lana ilaaliyo heshiisyada u ku dhisan yahay maamulka, danta gaarka ahna laga hor mariyo midda guud, oo masiiirka umadda oo dhan aan loo af-duubin u jeeddo siyaasadeed oo shaqasiyaad gaar ah wataan.
Dhamaan wax-garadka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada Galmudug, ayuu ugu baaqay in ay xalka arrinkaan u istaagaan, si loo helo xasillooni iyo nabad, wuxuuna Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta ku taageeray muuqifka uu ka istaagay, xasaradaha soo cusboonaaday.
Aqoonyahanku, wuxuu si weyn kaga digay dagaallo ka dhaca degaanka, wuxuuna carrabka ku dhiftay ciidamada lagu daad-gureeyay Dhuusamareeb, wuxuuna mar kale, ku celiyay in qoriga xabadda laga saaro, sidii qorshuhu ahaa ee lagu ballamay maalmihii lagu shirsanaa Hobyo.
Lixdan iyo siddeed xubnood oo Borofesoor Cabdiqaadir Maxamed Shirwac hoggaaminayo ayaa loo wakiishay howlaha (GHHG), ugu danbeynna 10th December 2019 ayaa guddoomiyaha lagu caleema saaray Muqdisho.